सेलिब्रेटीको दसैँ योजना, कसले कसरी मनाउँदै छन् ? « Sutra News
सेलिब्रेटीको दसैँ योजना, कसले कसरी मनाउँदै छन् ?
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०३:१९
बडा दसैँ नेपालीको घर आँगनमा प्रवेश गरिसकेको छ । अघिल्लाका बर्ष झै यसपालि पनि कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले स्थिति त्यत्ति सहज भइसकेको छैन । यद्यपि, परम्परालाई निरन्तरता दिँदै चाडपर्व भने सबैले मनाउने गरेका छन् । चाडबाड मनाउन सर्वसाधारणले झै सेलिब्रेटीले विशेष योजना बनाउँने गरेका छन् । सेलिब्रेटीहरूलाई यसवर्षको दसैँलाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? लक्ष्मण सुवेदीले प्रश्न गरेका छन् । हेरौं उनीहरूको जवाफ :–
बल्ल दसैँ आए जस्तो लागेको छ
पिङ चाहिँ खेल्नु पर्ला
यसपालि अघिल्लो बर्षभन्दा माहोल अलि रमाइलो छ । तर हामीले सावधानी चाहिँ अपनाउनै पर्छ । कोरोनाले गर्दा गतबर्ष त दसैँ साहै्र खल्लो भयो । यसपालि भने सबैतिर अलि सहज वातावरण छ । त्यसैले दसँैको रौनक अलि बढेको पाएकी छु ।
म यसपालि काठमाडौंमै दसैँ मनाउँछु । मम्मीको हातबाट टीका लगाउँछु । सामाजिक दुरी कायम राख्दै आफन्तको हातबाट टीका लगाइ आशीर्वाद लिन्छु । यो दसैँमा स्पेसल त्यस्तो केही प्लान छैन । हलमा फिल्म प्रदर्शन हुन थालेको देख्दा खुशी लागेको छ । घर नजिकै सिफल चौरमा पिङ हालेका छन् । टीकाको दिन भुइँ छोड्नु पर्छ रे, त्यहाँसम्म पुगेर पिङ चाहिँ खेल्नु पर्ला ।
दसैँ छैन, पोखरा घुम्न जाने प्लान छ
ठूली आमाको स्वर्गारोहणका कारण यसपालि दसैँ छैन । तर पनि दसैँ आउँदा मलाई अर्कै रौनक लागेको छ । कोरोनाका कारण अहिले पनि सबैमा त्रास छ । एकदम सुरक्षित भएर चाडपर्व मनाउनु पर्ने छ । बजारमा देखिएको भिडभाडले साँच्चै नै दसैँ आएको महशुस गराएको छ । तर यसले संक्रमण बढ्ने हो की भन्ने डर छ ।
यसपालि टीका नभएकाले दसैँमा कतै घुम्न जाने की भन्ने सोचमा छु । बिदेश घुम्न जानलाई पिसिआर टेस्ट, के के चाहिन्छ, त्यतिन्जेल त आफ्नै देशको जुनसुकै स्थानमा पुगिन्छ । पोखरा जाने की भन्ने सोचेको छु । दसैँ नभए ता पनि नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीमा दसैँ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
जुठो परेकाले दसैँ छैन
जुठो परेकाले मेरो यसपालि दसैँ छैन । मलाई खासमा दसैँ भन्दा तिहार मनपर्छ । झण्डै दुई बर्षयता कोरोनाका कारण सबैलाई घरमा थन्क्याइ रहेको थियो । अब भने स्थिति सामान्य बन्दै गइरहेको छ । फिल्म पनि रिलिज हुन लागेको छ । त्यसैले यसपालि धेरै खुशी लागेको छ ।
टीका लगाउन नहुने भए पनि दसैँले आफ्न्त, आफ्ना मान्छे भेटघाट, कुराकानी गर्ने अवसर जुटाइदिन्छ । त्यो नै खुशीको कुरा हो । म सम्पूर्ण नेपालीमा दसँैको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सर्तक भएर मनाउनुपर्छ
दसैँकै लागि भनेर खासै कुनै योजना बनाएको छैन । विगतका दुई बर्षका दसैँ कोरोनाको भयले खल्लो बनायो । यसपालि भने अलि खुल्न पाइएको छ । तर सर्तक भने हुनैपर्छ ।
घरपरिवार, आफन्तसँग टीकाजमरा लगाएर, ठूलाबाट आशीर्वाद लिएर, सानालाई आशीर्वाद दिएर दसैं मनाइन्छ । सुसुराली जाने, खाइपीइ गर्ने, पिङ खेल्ने योजना छ ।
यसपालिको दसैँ नयाँ मान्छेसँग
यसपालिको दसैँ मेरा लागि बिशेष छ । भर्खरै घरमा नयाँ मान्छे (छोरी) को आगमन भएको छ । हरेक दिन दसैँ जस्तो फिल भइरहेको छ । बितेका दुई बर्षभन्दा यसपालि वातावरण अलि खुला छ । तर पनि सुरक्षित तवरले दसैँ मनाउनु पर्छ ।
म पहिलाका बर्षहरूमा झ‌ैं सामान्य तवरले परम्परा निभाएर दसैँ मनाउँछु । यसपालि छुट्टै केही प्लान बनाएकी छैन । सानोमा दसैँ भन्ने बित्तिकै नयाँ कपडा, टीका लगाएर पाइने दक्षिणको लोभ लाग्थ्यो । अहिले भने अझ प्रगति होेस् भन्ने मान्यजनको आशीर्वाद प्यारो लाग्छ ।
परिवार भेटघाट, खाइपीइ गरिन्छ
पछिल्ला दुई वर्षको दसैँ खुलेर मनाउन पाइएन । यसपालि पनि पूर्ण रुपले त्रासविहीन चाहिँ हुन सकिएको छैन । तर पनि लकडाउन नभएकाले स्थिति सामान्य बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले यसपालि आफन्तहरूकोमा गएर टीका लगाइ दसैँ मनाउन पाइने भएको छ ।
दसैँ मलाई मन पर्ने पर्व हो । बाबा मम्मी, हजुरबुबा, हजुरआमाको हातबाट टीका लगाइ आशीर्वाद लिने, परिवारका सबै सदस्य जम्मा हुने, खानपीन, नाचगान गर्ने, हल्का तास पनि खेल्ने गरिन्छ ।
दर्शकसँग दसैँ मनाउँछु
घर, माइती दुवैतिर पुगिन्छ
–टीका प्रसाईं, गायिका
गत बर्ष कोरोना महामारीले गर्दा चाडपर्वमा समेत हिड्डुल गर्न सकस भयो । यसपालि भने स्थिति समान्य बन्दै गएको छ । त्यसैले यो दसैँ सिन्धुली र झापा पुगेर मनाउने योजनामा छु । घर र माइती, दुवैतिर पुगिन्छ ।
अब माहोल समान्य बन्दै गइरहेको छ तर पनि भीडभाडदेखि बचेर दसैं मनाउनु हुन म सबै जनामा आग्रह गर्छु । मेरो सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०३:१९
‘सप्तरङ्ग–३’को घोषणा, महानायक राजेश हमाललगायत चर्चित कलाकार सहभागी हुने
नयाँ फिल्म बनाउँदै निखिल उप्रेती
नेपाल कल्चरल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिवलको तेस्रो संकरण सम्पन्न, खरेललाई सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड
म दुईवटा विषयमा ए प्लस ल्याएर पास भएँ, ग्रामीण विकास लिएर पढ्ने इच्छा छ